Best 24 Eye Tattoo Ideas for Men and Women - Tattoos Art Ideas
sonitattoo Aogositra 18, 2016
Ny tetiasa #eye dia mihamitombo amin'ny kolontsaina samihafa ary samy hafa amin'ny Kristiana amin'ny fomba nentim-paharazana Ejipsiana. Ny maso dia hanampy anao amin'ny fampisehoana ny omniscience, fiarovana na fahazavana. Ny sasany mety hampiasa izany mba hisolo tena ny fahatsapana. Na inona na inona faniriana anananao, ny tato-maso dia zavatra hanampy anao amin'ny fisoloanao. Na dia mpikomy aza ianao, dia manarona anao ny masonao. Tsy misy olona iray voasokitra amin'ny maso #tattoo ary raha mankasitraka ny fomba fiainan'ny vehivavy ianao dia tsy afaka manao izany amin'ny tatoazy.
Ny mason'ireo zavaboary samihafa dia maneho zavatra samihafa. Manantona ohatra ny mason'ny horus sy ny hafa, manana tattoo izay tena manan-danja ho an'ny mpampiasa. Ny tatoazy maso dia tena tsara tarehy ary koa miresaka momba ny fiandrianan'ny ho avy. Ny maso dia lasa tatoazy #design izay mahatonga ny olona hankasitraka ny fomba fiainany. Ny maso rehetra ihany no mahita ny toetran'ireo andriamanitra.
Ny zavatra voalohany ataon'ny olona rehefa te haka tatoazy izy ireo dia ny mametraka fanontaniana. Ny fanontaniana dia izay hanampy azy ireo hahatakatra ny dikan'ny hoe manana tato-maso miavaka.
Tattoo eye maso
Ny fanaovana tattoo maso dia midika zavatra be dia be ho an'ireo olona mangetaheta mba hahazoana iray. Rehefa azonao ny iray toy izany, dia azonao atao ny miezaka bebe kokoa toy ireo taona niparitaka. Izany no fiankinan-doha.
Tattoo Chic Eye
Ny tattoo maso dia ny fiankinan-doha izay mampitombo ny fielezany sy ny fielezany mandra-pahatongan'ny tsy fisian'ny faritra amin'ny vatanao izay tsy ahitanao ireo tattoos maso eo aminao. Ny tattoo maso dia afaka milaza amintsika marobe fivarotana izay mety tsy te hohadinoinay fa maika
Raha azonao atao ny mamorona ny famoronana ho an'ny manam-pahaizana manokana, dia ho mora kokoa amin'ny tatoahanao ny hivoaka ho tsara tarehy araka izay tianao.
Ny tattoo maso dia manana fangatahana manokana izay antony mahatonga ny olona maro mampiasa izany. Ny tattoo maso dia manana fomba iray hanehoana ny tenany rehefa hita.
Eo amin'ny maso
Betsaka ny olona manao tato amin'ny maso dia manana antony iray na iray hafa amin'izany. Mety tsy azonao ny fientanam-po mandra-panana anao. Ny mpanakanto sy ny olona izay manana ny vatany dia efa nahavita zavatra.
Ny tato amin'ny maso dia mitondra fifandraisana amin'ny endrika zavakanto. Ny antony mahatonga ny tatoavin'ny maso ho lasa mahatalanjona nandritra ny taona dia satria maro ireo olona nahita feo tamin'ny tatoazy.
Tattoo lovely maso
Tsy maninona na avy aiza na avy aiza na inoanao ianao, raha tato amin'ny tato amin'ny maso, miova ny zava-drehetra.
Tattoo Eye vehivavy
Ny tattoo maso dia miteraka feo ho an'ny iray ary manisy lozam-pifamoivoizana maro be eo amin'ny fiainantsika. Androany, dia tsy famantarana famantarana intsony ny fikomiana intsony fa tsy heloka bevava izany. Azontsika atao ny milaza fa ny iray amin'ny isa dimy rehetra dia manana tati-maso tahaka izao.
Tattoo super eye maso
Nisy fotoana, tato ho ato ny tatoazy ary tena mampanaintaina be. Miaraka amin'ny isan'ireo fanavaozana eo ho an'ny olona manandrana ny fanandramana, dia lasa tsotra kokoa ny fizotry ny tato-maso. Ny fanaintainana amin'ny fahazoana tattoo maso dia miovaova.
Ny ampahany amin'ny vatana izay tato amin'ny maso dia tokony hapetraka ary ny haben'ny tatoazy maso dia zava-dehibe.
Tattoo malaza tsara tarehy ho an'ny vehivavy
Ny tatoazy maso dia azo ampiasaina amin'ny vehivavy mba hampisy fahasamihafana lehibe. Ny maso dia ampiasaina hanehoana ny fahitana sy ny fahitana. Ny hoavy koa dia azo aseho amin'ny maso. loharanon-tsary
Hanova ny lalao amin'ny fananganana tatoazy tsara tarehy izay hanintona ny saina ho anao foana ary hanampy anao hitazona ny hafatr'ireo drafitra amin'ny fanamarinana. Maro ny olona mieritreritra ny fampatsiahivana ny ankehitriny, ny lasa sy ny ho avy, azo tratrarina amin'ny fampiasana maso. loharanon-tsary
Ny tato an-tànana tanana dia mety ho tonga lafatra amin'ny mpanakanto matihanina. Ity dia iray amin'ireo faritra tsara indrindra ao amin'ny vatanao izay ahafahanao manintona ny tattoo ny masonao. Azonao atao koa ny mampiditra endrika hafa mba hampisehoana azy ireo ivelany. loharanon-tsary
Eo amin'ny tato amin'ny maso
Ny lamosina dia afaka manome an'io tatoazy io ho toy ny fijery manintona. Mihamangatsiaka sy miharihary any aoriana izy io. Azonao atao ny manefa izany na manafina azy amin'ny akanjo. Ity dia iray amin'ireo tombontsoa azonao omena anao ny tatoazy. loharanon-tsary
Ny mason'olon-tserasera dia tsy manan-tsahala. Tsy misy milaza ny hany fiheveranao azonao rehefa manana ny tatoavinao ao amin'io vatana io ianao. loharanon-tsary
Ny tati-tso-tso-tadidy no nahitanao anao rehefa nisintona ny masonao teo ianao. Hiova mandrakariva izany ho anao rehefa tsy mijery ianao. Manome anao koa ny rivotra iray ho olona mitandrina izay antsipirihany. loharanon-tsary
Tattoo Full Back Eye
Ny tato feno maso dia tsy azo atao tsinontsinoavin'ny olona mijery azy. Izany no mahatonga ny vehivavy maro hampiasa ny heviny mba hahatonga azy ireo hijery ny hevitry ny hafa. loharanon-tsary
Tattoo Daring Eye
Manao ahoana ny endrik'ity tattoo ity? Tena tianao ity tatoazy ity rehefa misotro ianao. loharanon-tsary
Ny hatsaranao no manintona ny maso ary afaka manamboatra ny masonao amin'ny masonao ianao amin'ny fomba manintona ny masonao. Tena tianao io tatoazy manokana io. loharanon-tsary
Tsindrio eto raha hijery bebe kokoa ny Tattoo Tattoo
fitiavana tatoazytattoos rahavavytattoo watercolorloto voninkazotattoos mahafatifatycompass tattootattoos voronatattoos armtattoo infinityarrow tattoomoon tattoostattoos backmasoandro tatoazymozika tatoazytatoazy loloAnkle Tattoosnamana tattoos tsara indrindramehndi designkoi fish tattootattoo cherry blossomHeart Tattoostattoostattoos footraozy tatoazyanjely tattoostato ho an'ny vatofantsikatattoo octopustatoazy ho an'ny zazavavydiamondra tattootattoos mpivadylion tattoostattoos ho an'ny lehilahytattoos sleevetatoazy fokotattoosNy zodiaka dia mampiseho tatoazytattoo ideascat tattoosscorpion tattootattoo eyeelefanta tatoazyhenna tattooeagle tattoostratra tatoazytanana tatoazytatoazy voninkazorip tattoosTatoazy ara-jeometrikatattoos crossTattoo Feather